टेलिकमको सेयर उकालो चढदा नेप्से इन्डेक्स घट्नबाट जोगियो - InHeadline
टेलिकमको सेयर उकालो चढदा नेप्से इन्डेक्स घट्नबाट जोगियो
By R. sharma on Oct 25,2017 - 14:29
नेपाल सरकारको आंशिक लगानी रहेको नेपाल टेलिकमको सेयर मुल्य पछिल्लो १५ दिनमा प्रति कित्ता १३० रुपैयाँले बढेको छ। टेलिकमको सेयर मुल्य उकालो चढ्दा यसले समग्र बजार परिसूचक नेप्सेको इन्डेक्सलाई घट्नबाट समेत रोकेको छ। सामान्यतया टेलिकमको सेयर मुल्य २ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से इन्डेक्स २ देखि २.५ अंकले बढ्ने गरेको छ।
साता दिनमै प्रति कित्ता करिब २०० ले बढेको टेलिकमको सेयर मंगलबारको कारोबारमा पनि प्रति कित्ता ८७६ रुपैयाँ र न्युनतम ८३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लगायतले लगानी बढाएकाले टेलिकमको सेयर मुल्य बढेको लगानी कार्ताहरु बताउछन् । केहि संस्थागत लगानीकर्ताले ठुलो संख्यामा टेलिकमको सेयर होल्ड गरेकाले आपूर्ति भन्दा माग बढ्न गई टेलिकमको सेयर मुल्य साता दिनमै प्रति कित्ता २०० ले बढेको उनीहरुको भनाई छ।
किन बढेयो टेलिकमको सेयर ?
टेलिकमले रणनीतिक साझेदारका रुपमा जापानिज कम्पनीलाई भित्र्याउने हल्लाका कारण समेत टेलिकमको सेयरमा आकर्षण चर्चा चलेको छ भने अर्को तर्फ टेलिकमको सेयरमा लगानी गर्दा कम्तिमा पनि ४० देखि ५० प्रतिशत प्रतिफल आउने हुँदा बिशेषगरि बैंक लगायतका संस्थागत लगानीकर्ता टेलिकमको सेयर होल्डर भएकाले गर्दा यसको मुल्य आकासिएको विश्लेषण गरिएको छ। टेलिकममा ३.५ प्रतिशत शेयर मात्र सर्बसाधारणको छ। जुन ५२ लाख ५० हजार कित्ता हुन आउछ। यस मध्ये अधिकांश सेयर बैंक, इन्स्योरेन्स, म्युचल फन्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, संस्थागत लगानीकर्ताको हातमा छ। यी सेयरहरु तत्काल बजारमा आउन सक्ने सम्भावना न्यून छ। अहिले कारोबारमा आएका शेयर कर्मचारीहरुको हो। कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर अर्थात ७५ लाख कित्ता हुन आउँछ। अहिले कारोबारमा आएको शेयर पनि यहि हो। यसका साथै बैंकले आफ्नो लगानी इन्स्योरेन्स र लघुवित्तबाट टेलिकम तर्फ सार्नुदिर्घकालिन लगानीकर्ता प्रतिफलका आधारमा लगानी गर्ने भएकाले टेलिकमको सेयर तर्फ आकर्षण बढ्नु ।
के अवस्था थियो मंगलबारको सेयर बजारमा ?
साताको तेस्रो दिन मंगलबार १५९ कम्पनीका १४ लाख ३३ हजार कित्ता शेयर खरिद बिक्रि भए। सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको नौ करोड १३ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो।दिनभरमा बजारमा १० अंकको उतार चढाव देखियो। सुरुवातमा चार अंकले बढेको बजार पछि घटेर १५६२ अंक सम्म ओर्लिएको थियो। पौने एक बजे देखि उकालो लगेको बजारले अन्तमा बृद्धि कायम राख्न सकेन।
आज उपसूचक मिश्रीत देखिएका छन्। कारोबारमा आएका नौ उपसुचकमा ६ समूह घटेका छन् भने तीन समुहमा वृद्धि देखिएको हो। बैंक ९.२, ट्रेडिङ ३.२९, होटल १४.५७, विकास बैंक ११.६४, जलबिद्युत १९.३ र फाइनान्स १.७८ अंकले घटेका छन्। बीमा २१.९, उत्पादन मुलक ८.९३ र अन्य ४१.९३ अंकले बढेका हुन्।मंगलबार सबैभन्दा धेरै मल्टिपर्पोज फाइनान्सका शेयर धनीले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन्। छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका शेयर धनीले चार प्रतिशत गुमाएका थिए ।